QM oo iska diiday in ay hoos tagto hay’ad waxbarasho oo Soomaaliya ka shaqeysa - Awdinle Online
QM oo iska diiday in ay hoos tagto hay’ad waxbarasho oo Soomaaliya ka shaqeysa
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay iska diiday in ay hoos tagto hay’ad waxbarasho oo Soomaaliya ka shaqeysa taasoo sheegtay in ay xiriir la leedahay hay’adda caalamiga ah ee qaramada midoobay.
Afhayenka Howlgalka UNSOM ee Soomaaliya Ari Gaitanis ayaa sheegay in uusan jirin xiriir iyo ogolaasho UNAoS ka haysto qaramada midoobay isla markaana laga been abuurtay sida uu hadalka u dhigay.
“Runtii wax badan kama dhahayno dhinacan marka laga reebo inuusan jirin xiriir rasmi ah nagala dhexeeya Akademiga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNAoS)” ayuu yiri Afhayeenka Howlgalka UNSOM ee Soomaaliya Ari Gaitanis oo mustaqbal la hadlay .
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha shacabka Baarlamanaka Soomaaliya & RW hore Cali Maxamed Geeddi
“UNSOM, waxaan dhowaan la socodsiinay jiritaankeeda waxaanan la soconaa arrimaha ku saabsan adeegsiga astaanta UN-ka iyo magaca maadaama ay jiraan geedi socod adag oo loo adeegsado waxyaabaha noocaas ah ujeedooyin rasmi ah” ayuu ku jiri Email uu kaga jawaabayo Su’aalaha Mustaqbal.
“Gundhig ahaan, waxay u baahan tahay oggolaansho qoraal ah oo ka socota UN si loo isticmaalo” Ayuu hadalkiisa raaciyay.
Dhankale masuuliyiin ka tirsan Wasaarada Waxbarashada Soomaaliya ayaa Mustaqbal u sheegay in ay diiwaan galiyeen jaamacadaan ka dib markii ay ugaysay Dukumintiyo muujinaya in ay xiriir la leedahay hay’adda Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay.
Ma cadda sababta ay Wasaaradda Soomaaliya ugu hadlin warqadaha qaramada midoobay been abuurkaku tilmaameen ee lagu diiwaan galiyay jaamacadaan.
UN Academy of Somalia oo ay Qaramada Midoobay sheegtay in aysan shaqo ku lahay ayaa waxaa Aas aasayeesheeda ka mid ah Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, hadana ka mid ah lataliyayaasha Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo ka qeyb-galay ay soo abaabushay QM
Next articleSoomaaliya Oo Loo Ansixiyey $137.5 Milyan